Nadiifinta Wax- Bellinwax
Waxyaabaha wax lagu nadiifiyo ee Bellinwax waa wax khafiifa oo khafiif ah oo wax ilaaliya, waxaa laga dhigay iftiinka dusha sare oo iftiimaya waqti dheer. Mar buuran karaa marmar iyo granite, waxay ku habboon tahay dhagax kasta.
PAG budada hufan ee hufan (5 dheeraad ah)
Budada nadiifinta dheeraadka ah ee 5 ee qashinka dabiiciga ah ka dib marmar marmar, dhagax, travertine, palladium iyo sagxadaha dhulka. Budada 5-ta dheeriga ah kaliya ma siiso dhalaal dabiici ah dusha marmarka iyada oo aan la abuurin filim, waxay siisaa marmarka dhalaalka dhalaalaya, laakiin sidoo kale waxay ka dhigeysaa dusha sare meelaha aan biyaha iyo wasakhda la marin karin, taas oo sahlaysa nadiifinta.
Budada huruud-nadiifinta -YP
Marmarka la cusboonaysiiyay waa alkali badan yahay waana wasakh badan yahay, budada nadiifinta waxaa laga sameeyaa noocyo aashito ah, waxay door ka ciyaari kartaa aashitada iyo dhexdhexaadnimada alkali iyo nadiifinta, samaynta dusha sare oo nadiif ah. Sidoo kale hagaaji dhalaalka marmar dusha liita ka dib shiidi.